Ny tsenan'ny trano hendry manerantany dia hitombo amin'ny $ 137.9 miliara ao anatin'ny 5 taona ho avy
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny tsenan'ny trano hendry manerantany dia hitombo amin'ny $ 137.9 miliara ao anatin'ny 5 taona ho avy
Zion Market Research dia namoaka tatitra fikarohana vaovao mitondra ny lohateny hoe "Smart Home Market - By Product (Smart Kitchen, Security & Access Control, Light Control, Home Healthcare, HVAC Control, ary ny hafa): Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis and Forecast, 2020- 2026”. Araka ny tatitra, ny haben'ny tsena an-trano dia antenaina hahatratra USD 137.9 miliara amin'ny 2026 amin'ny USD 85.6 miliara amin'ny 2021, amin'ny CAGR 10.4% mandritra ny vanim-potoana.
Zion Market Research dia namoaka tatitra fikarohana vaovao mitondra ny lohateny hoe "Smart Home Market - By Product (Smart Kitchen, Security & Access Control, Lighting Control, Home Healthcare, HVAC Control, Ary ny hafa): Global Industri Perspective, Comprehensive Analysis And Forecast, 2020- 2026 ". Araka ny tatitra, ny tsena an-trano marani-tsaina ny habeny dia antenaina hahatratra $ 137.9 miliara amin'ny 2026 avy amin'ny $ 85.6 miliara amin'ny taona 2021, amin'ny CAGR 10.4% mandritra ny vanim-potoana vinavina.
Araka ny voalazan'ny mpandinika ao amin'ny Zion Market Research, ny fitomboan'ny fitomboana lehibe ho an'ny tsenan'ny trano marani-tsaina dia ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena eo amin'ireo mpampiasa momba ny fanjifana angovo, ny fitomboan'ny fidiram-bola azo ampiasaina any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana, ny fitomboan'ny mponina antitra, ary ny fandaharan'asan'ny governemanta. Ankoatr'izany, ny fitomboan'ny fangatahana fikarakarana ara-pahasalamana dia manome hery ny fampandrosoana ny tsenan-trano an-trano. Amin'ny lafiny iray, ny tsingerina fanoloana fitaovana lava sy ny vidiny avo lenta miaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa voafetra dia fanamby lehibe manakana ny tsenan-trano marani-tsaina tsy hifindra amin'ny dingana fananganana faobe manomboka amin'ny dingana voalohany.
Na eo aza izany, ny vokatra vaovao natombok'ireo mpilalao tsena dia mampitombo ny fifandrafiana ary mampiroborobo ny fampandrosoana ny tsenan-trano an-tsaina. Ohatra, tamin'ny Aogositra 2018, Philips Hue dia nanambara jiro marani-tsaina vaovao maromaro mitondra ny fivoaran'ny tsenan-trano marani-tsaina manerantany.
Ny fizarana ny tsena an-trano dia arakaraka ny faritra sy ny vokatra. Ny fizarana vokatra amin'ny tsena an-trano dia ny fitsaboana ara-trano, lakozia marani-tsaina, fifehezana HVAC, fanaraha-maso jiro, sns. Ny fanaraha-maso ny jiro dia nahazo ny ampahany betsaka tamin'ny tsena an-trano noho ny fihenan'ny fampiasana herinaratra tao an-trano. Ny fantsom-pahazavana dia mamaritra ny hamafin'ny hazavana artifisialy isaky ny hazavana voajanahary, noho izany dia mampihena ny fampiasana herinaratra ary manatsara ny tsenan-trano an-trano.
Amerika Avaratra dia nahazo ny ampahany lehibe indrindra amin'ny tsenan-trano marani-tsaina noho ny fitomboan'ny mponina sy ny fitomboan'ny fangatahana fikarakarana ara-pahasalamana ao an-trano. Eoropa dia tsena an-trano manan-tsaina iray hafa manenjika an'i Amerika Avaratra. Ny fandraisana andraikitra ataon'ny governemanta any Amerika Avaratra dia misy ny fanaraha-maso lavitra ny metatra elektrika, ny etona ary ny rano mba hidirana moramora ao anaty tambajotra marani-tsaina. Ny angovo sy ny fitsitsiana vola, ny fahanteran'ny mponina, ny fahafaha-milamina, ny filaminana, ny fandraisana andraikitra ataon'ny governemanta ary ny fihenan'ny gazy karbonika no tena mampirongatra ny fampandrosoana ny tsena an-trano amin'ny taona ho avy. Azia Pasifika ihany koa dia kasaina hampiseho fampandrosoana miavaka amin'ny tsena an-trano an-tsaina ao anatin'ny taona ho avy.
Ny orinasa malaza eo amin'ny tsena an-trano dia ny Siemens AG, Legrand, Ingersoll-Rand plc, Johnson Controls Inc., Acuity Brands, Inc., Schneider Electric SE, United Technologies Corporation, ABB Ltd., Nest Labs, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Crestron Electronics, ary Honeywell International Inc. ankoatry ny hafa. Ireo mpilalao ireo dia voalaza fa hampitombo ny tsena an-trano feno fahendrena manerantany.